Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း)
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရင်ခေါင်းတွင်းသို့အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အ စာအိမ် အပေါ်ပိုင်းသည် ရင်ဝမ်းတားကြွက်သား ၏ အပေါက် မှ ကျွံထွက်သော အခြေအနေကို ခေါ်ပါသည်။ ရင်ဝမ်းတား ကြွက်သားသည် အစာအိမ်ကို ရင်ခေါင်းမှ ခြားထားသော ကြွက်သား အကာအယံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ရင်ဝမ်းတားကြွက်သားသည် အစာရေမြိုပြွန်အတွင်းသို့ အစာအိမ်တွင်းမှ အက်စစ်များ တက်မလာအောင် ကူညီ ပေး ပါသည်။ ရင်ခေါင်းတွင်းသို့အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ရှိပါက အက်စစ်များ တက်လာရန် ပို၍လွယ်ကူစေပါသည်။
အစာအိမ် မှ အက်စစ်များ အစာရေမြိုပြွန် အတွင်းသို့ လျှံတက်ခြင်းကို gastroesophageal reflex disease (GERD) ဟု ခေါ်ပါ သည်။ ဤရောဂါသည် အစာအိမ်နှင့် လည်ချောင်းတွင် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်အရွေး မည်သူမဆို ဤရောဂါ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ် ကျွံဝင်ခြင်း သည် အမျိုးသမီးများ၊ အဝလွန်သူများနှင့် အသက် ၅၀ ကျော်သော သူများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် အစာ အိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ကို ဖြစ်ပွားမှုနည်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာ မပြတတ်သော်လည်း အစာစားပြီး တစ် နာရီအကြာလောက်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်လာတတ် ပါသည်။ ရင်ပူခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ အန်ခြင်း နှင့် မြိုချရာ တွင်ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ခါးကုန်းပါက သို့မဟုတ် လဲလျောင်းပါက ရင်ပူခြင်း ပို၍ ဆိုးစေပါသည်။
အစာရေမြိုပြွန် ရောင်၍ သွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရင်ခေါင်းတွင်းသို့အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ရင်ဘတ် နှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင် ပြင်းစွာနာခြင်း ဖြစ်ပါမည်။ ပျို့တက်ကာ အော့အန်ခြင်းပါသည်။ ဝမ်းသွားခြင်းနှင့်လေလည်ခြင်း မလုပ် နိုင်တော့ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက သင်သည် ညစ်၍ကျွံခြင်း သို့မ ဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ကုသ ရန် လိုပါသည်။
ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းခေါ်ဆိုပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှု သည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေ ကောင်းမွန်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းရင်းကို မသိရှိသေးပါ။ ရင်ဝမ်းတားကြွက်သား သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အစာရေမြိုပြွန် ဖြတ်သွားသော အပေါက် သေးသေး တစ်ပေါက်ရှိပါသည်။ ထိုအစာရေမြိုပြွန်သည် အ စာအိမ်နှင့် ဆက်ထားပါသည်။ အစာအိမ်သည် ထို အပေါက် မှတစ်ဆင့် ဆွဲတင်ခံရ၍ ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ် ကျွံဝင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေပါသည်။
ရင်ခေါင်းတွင်းသို့အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်းသည် အောက်ပါတို့ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မွေးရာပါ ရင်ဝမ်းတားကြွက်သားတွင် အပေါက် ကြီးခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြွက်သားများတွင် ဖိအားများခြင်း။ ဥပမာ- ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းညစ်ခြင်း၊ လေးလံသော ပစ္စည်းများ မခြင်း။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း နှင့် ဝမ်းညစ်ခြင်း စသည်တို့သည် ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် ဖိအားကို များ စေကာ ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ် ကျွံဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်စေကို များစေပါသည်။ ထို့အပြင် အသက် ၅၀ကျော်သူများသည် လည်း ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ် ကျွံဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ များပါသည်။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ် ကျွံဝင်ခြင်း ကို အတည်ပြုရန် ပြောင်းသွင်း၍ကြည့်ခြင်း နှင့် ဘေရီယမ် ဆေး ရည်သောက်ပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြောင်းသွင်း၍ကြည့်ခြင်းတွင် အစွန်းတွင် ကင်မရာငယ်ပါဝင် သော ပြွန်အသေးကို အစာရေမြိုမှဖြတ်စေ၍ ကျွံခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစာရေမြိုနှင့် အစာအိမ် ထိသော နေရာတွင် ဖိအားနည်းကြောင်း သိစေရန် ဖိအားတိုင်းခြင်း (manometry) ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Hiatal Hernia (ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရောဂါလက္ခဏာများကို ထိန်း ချုပ်ရန်နှင့် ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ နေထိုင်မှု ပုံစံနှင့် အစားအသောက်ကို ပြောင်းလဲရပါမည်။ ကုတင် ခေါင်းရင်းကို ၄-၆ လက်မ မြှောက်ထားခြင်း ( သစ်သားတုံး သို့မဟုတ် အုတ်ခဲဖြင့်) ဖြင့် အိပ်နေစဉ်တွင် အစာအိမ်မှ အက်စစ်များ အစာရေမြိုသို့ ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင် ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကို ပိုဆိုးစေသော အစားအစာ နှင့် ဖျော်ရည်များကို ရှောင်ပါ။
ထိုပြောင်းလဲမှုများသည် မလုံလောက်ပါက အောက်ပါ ဆေးများ အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစာအိမ်အက်စစ်ကို အချဉ်ဓါတ်ဖြေသော ဆေး များ
အက်စစ်ထွက်ခြင်းကို လျော့ချပေးသော ဆေးများ။ ranitidine, famotidine, proton pump inhibitor (omeprazole)
ရောဂါလက္ခဏာများအား ထိန်းချုပ်၍ မရပါက သို့မဟုတ် အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်း နှင့် သွေးထွက်ခြင်း စသော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပါက အစာအိမ် ကျွံခြင်းကို ပြုပြင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုအပ်ပါမည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် ရင်ခေါင်းတွင်းသို့အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် ရင်ခေါင်းတွင်းသို့ အစာအိမ်ကျွံဝင်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
အဝလွန်နေပါက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချပါ။
ဖြည်းဖြည်းစားပါ။ အစာများများကို တစ်နေ့ ၁-၂ ကြိမ် စားခြင်းထက် အစာနည်းနည်းကို တစ်နေ့ ၄-၅ ကြိမ်စားပေးပါ။
ကြော်ထားသော၊ စပ်သော၊ အဆီပါသော အစား အစာများကို မစားပါနှင့်။ citrus ပါသော ဖျော်ရည် များ၊ peppermint နှင့် အပူအစပ် အစားအစာ များ သည် အစာအိမ်ကျွံခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 311
Hiatal hernia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiatal-hernia/basics/treatment/con-20030640. Accessed Jul 14 2016
Hiatal hernia. http://www.webmd.com/digestive-disorders/hiatal-hernia?page=1#2. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 311
Hiatal hernia. http://www.webmd.com/digestive-disorders/hiatal-hernia?page=1#2. Accessed Jul 14 2016